प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना कि निर्वाचन ? « MNTVONLINE.COM
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना कि निर्वाचन ?
हुँदाखाँदाको प्रतिनिधिसभा विघटन गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी वैशाखमा मध्यावधी निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि अहिले मुलुकभर प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना कि निर्वाचन भन्नेमा बहस चुलिएको छ । मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको तीन वर्ष वित्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यावधि निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेपछि केही राजनीतिक दल प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् भने केही दल निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन् । राजनीतिक दलहरु आ–आफ्नै योजनाअनुसार अहिले जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न जुटेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानविपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमा सुनुवाइ पनि जारी छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत छ या छैन भन्ने निक्र्यौल गर्न अझै केही समय लाग्ने देखिँदै गएको छ ।
चुनाव गर्नु ठीक र प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्नु ठीक भन्नेमा नागरिक विभाजित देखिएका छन् । हुन त अधिकांश नागरिक कुनै न कुनै राजनीतिक दलको समर्थन र विरोधमा जुट्नु कुनै नौलो विषय होइन । अहिले राजनीतिक दलहरुले टोलटोलमा आफ्नो संगठन विस्तार गरेका छन् । उनीहरुले सर्वसाधारण नागरिकलाई आफ्नो पार्टीका सदस्यता दिएका छन् । पार्टीका नेता तथा अगुवाहरुले जे भन्यो त्यसकै पछि लाग्नेको संख्या उल्लेख्य छ । त्यसले पनि जनमत विभाजित देखिँदै आएको छ । चुनाव गर्दा ठीक कि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुँदा ठीक भन्नेमा धेरै नागरिक स्पष्ट हुन सकेका छैनन् । किनकी आफूले समर्थन गरेको दलको अगुवाले भनेको कुरामै उनीहरु विस्वस्त हुने गरेका छन् । तर, अहिले राजनीति नै स्पष्ट दुई धारमा विभाजित भएको अवस्थामा नागरिक पनि विभाजित भएका हुन् । चुनाव हुँदा र प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुँदा के फरक पर्छ भन्ने बारेको वास्तविकता बुझ्ने सामथ्र्य राख्ने नागरिक धेरै कम मात्र छन् ।
नेपालको संविधानमा प्रत्येक ५/५ वर्षमा संसदीय निर्वाचन हुने उल्लेख छ । तर बीचमै प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा निर्वाचन गर्नुको विकल्प रहँदैन । अहिले सत्तारुढ दल स्पष्ट रुपमा दुई खेमामा विभाजित भएको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस मध्यावधि निर्वाचन भएमा आफूलाई फाइदा पुग्ने विश्लेषण गर्दै आएको छ । वास्तवमा सत्तारुढ दलको मत विभाजित हुँदा कांग्रेसलाई फाइदा पुग्ने पनि देखिँदै आएको छ । तर निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका कांग्रेसमा देखिन्छ । कांग्रेसका केही नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन गराउनका लागि घोषणा गरेको नभई आफ्नो पदावधि लम्ब्याउन र निरंकुशता लाद्न निर्वाचनको कार्ड फ्याँकेको तर्क गर्दै आएका छन् । कांग्रेसका केही नेताहरुले देखाएको आशंका फगत अनुमान र आशंका मात्र हो । किनकी प्रधानमन्त्री ओलीले किन प्रतिनिधिसभा विघटन गरे र निर्वाचन गराउने इच्छाशक्ति छ कि छैन भन्ने बुझ्ने प्रयास गरेको देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर निर्वाचनको माहोल बनाउने काम गर्नुपर्छ । निर्धारित समयमै निर्वाचन हुन्छ भन्ने आश्वस्त दलहरुलाई पार्न सक्नुपर्छ । मुखले मात्र होइन, व्यवहारिक रुपमै निर्वाचनप्रतिको वातावरण बनाउन सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन ।
अहिले सत्तारुढ दल नेकपा स्पष्टरुपमा दुई भागमा विभाजित भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना नै भयो भने पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुँदैन । नेकपा फुटेमा कुनै एक पक्षको मात्र सरकार गठन गर्न बहुमत पुग्दैन । त्यो अवस्थामा अर्को दलको सहयोग अपरिहार्य रहन्छ । राजनीतिक स्थायित्व नहुने नै हो भने प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुको कुनै औचित्य रहँदैन । बरु नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनमा जाँदा नागरिकले कसलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पनुपर्ने हो र मुलुकलाई कसले राम्रोसँग हाँक्न सक्छ भनेर अभिमत जाहेर गर्न पाउने छन् । नागरिकले एउटा दललाई मात्र जिम्मेवारी दिएमा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सक्छ । त्यो हुन नसकेमा पनि नयाँ जनादेशले मुलुकलाई एउटा दिशा दिने छ ।
हुन त पाँच वर्षमा निर्वाचन हुने भनिएको छ । निर्वाचन भएको तीन वर्ष बितिसकेको छ । दुई वर्षका लागि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको लबिइङ गर्दा केही समय त्यत्तिकै घट्किने छ । मुलुकमा द्वन्द्व मात्र बढ्ने देखिन्छ । अहिलेदेखि नै सडक आन्दोलन हुन थालिसकेका छन् । त्यसले सर्वसाधारणलाई कष्टबाहेक केही हुन पाएको छैन । दुई वर्षका लागि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना नै भए पनि सरकार गठन, विघटन र राजनीतिक दलका नेताहरुबीचको आरोप प्रत्यारोपबाहेक नागरिकले कुनै नयाँ कुराको अनुभूति पाउने छैनन् । प्रधानमन्त्री को बन्ने, कसले कसलाई होच्याउने वा आफू ठूलो अरु सबै काम नलाग्ने भन्ने बाहेक नेताहरुका मुखबाट नयाँ कुरा सुन्न जनताले पाउने छैनन् । बरु अहिले नै निर्वाचन हुने वातावरण बनाउन सबै दल एकजुट भएर लाग्नुपर्छ । निर्वाचनपछि नयाँ जनादेशअनुसार मुलुक अघि बढ्ने छ ।
दमौली । दमौली कारागारमा रहेका कैदीबन्दीबीच आज साँझ झडप हुँदा पाँच घाइते भएका छन् । झडपमा परी तीन नाइके र दुई कैदीबन्दी घाइते भएको दमौली
देशभर ११२ जनामा कोरोना संक्रमण, थप ४ जनाको मृत्यु
कांग्रेसका नेता नवीन्द्रराज जोशीलाई ब्रेन स्टोक, अपरेशन गर्ने तयारी